Haintrano teny Ambodivona Nisy mpivarotra very fananana ana miliara ariary
Ritra ny ranon’ny mpamono afo avy eny Anosivavaka, Andravoahangy ary Tsaralalana nefa mbola nahazo vahana nijoalajoala ny afo ka velon-tebiteby tanteraka ny mponina.
Sahirana ihany mantsy vao nahita ilay fakana ranon’ny mpamonjy voina tany Manjakaray, raha ny filazan’ireo niatrika ny fahamaizan’ireo trano hazo 20 mahery manamorona ny tobin-dasantsy Total Ambodivona afak’omaly alina. Raha sanatria io no may dia tanàna maro no ravarava. “Mila atoro ny mponina ny fotodrafitrasam-panjakana. Tena nanezaka ny “pompier”. Rano koa izany natosany teto amin’ny manodidina ny tobin-tsolika mba tsy hitaran’ny afo”, hoy i Tiana Marcel Harijaona, tompon’andraikitry ny fokontany Manjakaray II D, izay nisy ny loza. Nilaza i Njakatiana Noelisoa fa niainga tao amin’ny mpivarotra enta-madinika ny firehetana vokatry ny herinaratra. Niezaka namoha ilay trano ihany ireo mpiambina, tamin’ny 8ora alina saingy nihidy mafy io. Nahazo ny menaka sy ny entam-barotra mora mirehitra tao izany ka nipoaka faran’izay mafy ka nisintaka tanteraka ireo mpiambina. Korontam-by sy bilao sisa azo raisina fa hotohoto tanteraka ny entana izay nitentim-bidy miliara ariary an’i Njakatiana Noelisoa. “Demareur sy alternateur” no amidiny. Vao tamin’ny talata teo no nampiditra entana iray kaontenera izy. Marihina fa 120.000 ariary no ivarotany ny iray amin’ireo entana ireo izay eran’ny tanan-kanila ny iray. Entina ilazana izany fa kely be vidy ireo kojakojan’ny fiara izay nameno kaontenera ireo. Mbola zara fa nahalafo tamin’izany anefa izy ireo fa vao roa andro nivarotana, nefa mbola nisy ambin’entana maro ihany koa tao.